Mist Fan ma siin doonaa Beddelka Ka Fiican ee Qaboojiyayaasha Hawada?
Taxanaha Taageerayaasha Warshadaha
Taageerayaasha Axial Iyo Qalabka
Waxaa jira qaabab badan oo la heli karo si loo qaboojiyo hareerahayaga loona yareeyo kuleylka kulul. Jawiga kulul wuxuu yareeyaa heerka tamarta jirkeena wuxuuna noo diidayaa inaan diirada saarno shaqo kasta. Waxaan dareemeynaa inaan dhib badneyn marka heerkulku sarreeyo maxaa yeelay sii deynta dhididka jirkeenna ayaa sii badnaan doonta. Marka si hoos loogu dhigo heerkulka hareerahayaga qalabka qaboojiyaha qaarkood waa inuu jiraa. Badanaa dadku waxay doorbidaan qaboojiyeyaasha ama qaboojiyeyaasha hawada inay ka dhigaan heerkulka qabow guryahooda ama xafiiskooda.
Waxaa jira beddelaad cusub oo loo yaqaan taageerayaasha ceeryaamo in laga heli karo suuqa laakiin aan si fiican loo aqoon weli. Taageerayaasha ceeryaamo uma baahna dayactir joogto ah sida nadaafadda oo wax dhibaato ah kuma laha urta xun. Waxa kaliya ee ay u baahan tahay waa in la buuxiyo biyo maalin kasta taas oo ah uun jajab looga baahan yahay qaboojiyeyaasha hawada.
Aan Fahmo Sida Taageerayaasha ceeryaamo waa Beddelayaal Ka Fiican Qaboojiyeyaasha Hawada
Dabcan kharashka bilowga ah ee taageerayaasha ceeryaamo waa in ka badan qaboojiyaha hawada laakiin waxay u isticmaashaa biyo ka yar kuleylka iyo qaboojinta kuleylka marka loo eego qaboojiyaha hawada. In kasta oo qaboojiyaha hawadu ka qaalisan yihiin haddana waxay isticmaalaan biyo badan si ay si joogto ah ugu shaqeeyaan. Haddii aanad haysan biyo ku filan haanta biyaha ee qaboojiyaha ma samayn karto jawiga qabow. Iyo adeegsiga biyo badan inta lagu jiro biyo yaraanta waxay ka dhigeysaa qaboojiyayaasha xulasho liidata.
Nadiifinta joogtada ah ee ceeryaamo fan looma baahna si looga fogaado urta xun. Taageerayaasha ceeryaamo wuxuu si wax ku ool ah u joojiyaa duqsiyada iyo cayayaanka oo aan fiicnayn wuxuuna sifeeyaa cayayaanka si iskiis ah ayuu u cabayaa. Tani waxay ka dhigeysaa xulasho qaboojin oo wanaagsan iyadoo laga ilaalinaayo arrimaha caafimaadka ee kala duwan. Halka taangiga biyaha iyo suufka biyaha ee qaboojiyaha hawada u baahan nadiifin joogto ah si looga fogaado urta xun. Dukhsiga iyo cayayaanka waxyeellada leh waxay si fudud ku geli karaan qaboojiyeyaasha hawada iyo boodhka & qiiqa lama joojin karin. Tani waxay u egtahay inay abuurto dhibaatooyin caafimaad oo kala duwan.
Haddii taageerayaasha ceeryaamo waxaa la dhigaa banaanka sida guriga cagaaran markaa waxay ka faa'iideysan kartaa dhirta iyadoo la kordhinayo heerka qoyaanka sidoo kalena la qaboojinayo aagga hareereysan. Bakhaarka sidoo kale wuxuu isticmaalaaceeryaamo fan si ay cunnooyinkooda u ahaadaan kuwo cusub si ay uga dhigto mid aad u xiiso badan isticmaalayaasha. Laakiin qaboojiyaha hawadu haynta qoyaanka dhirta ama haynta alaabada la cuni karo mid cusub laguma sameyn karo si wax ku ool ah.
Taageero ceeryaamossi fudud ayaa loo dhigi karaa meel kasta, waa kuwo si fudud loo dhaqaajin karo isla markaana dabooli kara meel aad u yar. Inta hawada la afuufayoceeryaamo fan ma tuurayo dhibcaha biyaha wuxuuna ka dhigayaa hareeraha qoyan. Halka, inta badan qaboojiyaha hawadu ay weyn yihiin marka la barbar dhigoceeryaamo fans oo u baahan meel ka badan inta ceeryaamo fan. Waxay u baahan yihiin dadaal si ay ugu guuraan meelo kale waxayna u baahan yihiin aag cayiman oo loo qoondeeyey. Waxay tuurtaa dhibcaha biyaha taas oo mararka qaar dhib badan.
Sidaa darteed, in lagu daro huurka guriga gudihiisa haddii hawo la heli waayo ceeryaamo fan waxay u taagan tahay ikhtiyaar fiican. Waxay uumi bixisaa biyaha, waxay xakameysaa heerkulka xad-dhaafka ah waxayna siisaa jawi wanaagsan hareeraha.
Waqtiga boostada: Juun-15-2021
Cinwaanka:No. 388 Linruo Wadada, Magaalada Songmen, Magaalada Wenling, Gobolka Zhejiang